रामधुनीभासी नगरपालीकाको आ.ब. २०७३÷७४ को प्रथम चौमासिक सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न -
रामधुनीभासी नगरपालीकाको आ.ब. २०७३÷७४ को प्रथम चौमासिक सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक २१, २०७३ समय: २:१५:१०
झुम्का, २१ कार्तिक / रामधुनीभासि नगरपालीकाको आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ को प्रथम चौमासिक सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम सनिवार सम्पन्न गरेको छ । कार्यालयले चौमासीक भित्र भए गरेका कार्यक्रमहरुको आयब्य बिवरण पार्दशी र शिक्षा ,स्वस्थयमा सुझाव सल्लाह लिदै कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यालयले चौमासीक भित्र भए गरेका कार्यक्रमहरुको आयब्य बिवरण हर्षलाल चौधरीले प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो । नगरपालीकाकै सभाहलमा भएको सो कार्यक्रम्मा प्रस्तुत गरीएका कार्यक्रमहरुको आयब्य बिवरणमा स्थानिय नगरवासीहरुले अलोचत्नामत्क सुझाव दिएका छन । सुझाव दिदै विविधमा बढि खर्चभएको , लक्षित बर्गहरुमा गरीएको बास्तविक खर्च समितिले नपाएको लगायतका सुझवहरु दिएका छन । नहरको डिलमा आदिवासी पार्कमा ७ लाख लगानीगर्दा अहिले सिचाईले निर्माण कार्य रोकेको अवस्थामा सो रकम रकमानतर र सहिठाउँमा लगानि गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
त्यसैगरी नगरवासीहरुले नगरपालीकामा काम भन्दा दाकर्मचारीको संख्या बढिभएको गुनासो गरेको छ । नियुक्त गरीएका नगरपालिकामा कामै गर्न नजान्ने कर्मचारीहरुपनी रहेको गुनासो आएको छ । कार्यालयमा कुनै काम बिशेषले फर्म भर्नुपरेमा सेवाग्राहिहरुले सिकाईमाग्दा कर्मचारीलाई फर्म भर्न समेत नसक्ने कर्मचारीहरुपनि रहेको उनिहरुले गुनासो गरेका छन । कार्यालयमा पत्र टाईप गर्दा पनि एउटा कर्मचारीलाई पढन लगाउने अर्कोले टाईपिंग गर्ने गरेको समेत कर्मचारीहरु रहेको बताएका छन । झुम्कामा साप्ताहिक दुईपटक लागीरहेको हटियालाई नगरपालिकाले सार्न नसकेको गुनासो आएको छ । नगरपालिकाले निर्णय गर्ने तर सार्न नसक्ने बताएका छन । त्यसैगरी भासि माध्यमिक बिध्यालयमा बिध्यार्थि घटदै गएको,गुणस्तरीय शिक्षामा कमि रहेको बताएका छन । स्वस्थ्य क्ष्ोत्रमा भने झुम्का स्वस्थ्य चौकीलाई अस्पतालको रुप दिनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
नगरवासीबाट आएको गुनासो नगरपालिका कार्यालयबाट कार्यकारी अधिकृत प्रमोद चौधरी,शिक्षाक्षेत्रबाट समुदायीक बिध्यालय भासिमाबिका प्राधनाध्यापक सत्यनारायण धामि,स्वथ्य क्षेत्रबाट झुम्का स्वस्थ्य चौकी ईन्चार्ज पर्शुराम शाहले जवाफ दिनु भएको थियो । कार्यक्रममा स्थानिय राजनितिकदल,संघ संस्था,बिषयगत समिति,नागरीक वडा मञ्चका प्रतिनिधिहरु उपस्थित रहेको थियो ।